Iipesenti ezili-10 ezivulekileyo zabavelisi kunye nababoneleli-eTshayina i-10% yokuVuleka kweFektri
I-Window enelanga enesitayile Ilanga leLanga elangeni elikhuselekileyo elingashukumiyo kwilaphu elingaboniyo
Ukuba ubuhle benzelwe umphezulu kuphela, bunokwenza amehlo onwabe kuphela, ukuba ubuhle bunokusasazeka ngaphakathi, bungenza umphefumlo wonwabe, uyabazi ubomi, kwaye ndiyakwazi.
Iimfama zeRoller ziyinxalenye yezinto ezibalulekileyo ezithambileyo kwindlu entsha. Zibalulekile kwigumbi lokuhlala, kwigumbi lokulala, kwisofa, njl. Zinefuthe elikhulu kwimbonakalo yokuhombisa ekhaya.
China Umenzi weSunscreen Roller Blinds Ilaphu Ilanga lekhethini Blinds
Formaldehyde kunye nedayi equkethe i-Amoniya
Iindidi ezahlukeneyo zethunzi zihlala zisebenza kwi-anti-shrinkage, anti-scalding, anti-wrinkle kunye nokulungiswa kombala ngexesha lokwenza idayi kunye nokugqitywa. Ngokubanzi, iimpendulo zokudibanisa ezinqamlezileyo ziyafuneka, kwaye i-formaldehyde sisixhobo esisetyenziswa ngokubanzi somnqamlezo.
Ngenxa yokungapheleli kokunxibelelana okunqamlezileyo, i-formaldehyde engakhange ithathe inxaxheba ekuphenduleni okunqamlezayo okanye kwi-formaldehyde eveliswe yi-hydrolysis iya kukhutshwa kwilaphu elithungwe lilanga, neliza kubangela ukucaphuka okunamandla kwimiphunga yokuphefumla, ulusu namehlo, kubangele ukudumba. , kwanokubangela i-allergies kunye nomhlaza.
I-HDPE enemibala e-Anti-UV enefolder yeLanga eshukumayo esonga i-Roller Blinds ye-Sun Shade Mesh
Imigca yeRoller Blinds
Uyenza njani uhombiso lwasekhaya? Uninzi lwabantu luphantse ukukruna impandla ngenxa yokuhonjiswa kwekhaya. Baza kucinga ngendlela yokubeka iishelufa zeencwadi, indlela yokunxiba amagumbi okulala, indlela yokudibanisa amakhethini kunye neesofa. Namhlanje, siza kukuzisela ukhenketho lombala wokudibanisa amakhethini, iibhokisi kunye neesofa!
Isofa kunye nekhethini, njengezinto ezimbini ezinkulu ezithambileyo kwigumbi lokuhlala losapho, umgangatho we-collocation yazo, inqanaba lobutsha linxulumene ngqo nobuhle bemeko yonke yekhaya. Masithethe ngayo!